အက်ဖ်-၂၂ ရက်ပ်တာ - ဝီကီပီးဒီးယား
ရေဒါမြင်ကွင်း ပုံရိပ်လျော့ တိုက်လေယာဉ်
ဘိုးအင်း ကာကွယ်ရေး စစ်စတမ်
စက်တင်ဘာ ၂၉ ၁၉၉၀
ဒီဇင်ဘာ ၁၅ ၂၀၀၅
အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆၅ ဘီလီယံ
အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁၅၀ မီလီယံ 
လော့ခ်ဟိမာတင်/ဘိုးအင်း အက်ဖ်-၂၂ ရက်ပ်တာသည် လူတစ်ယောက်စီး အင်ဂျင် ၂လုံးတပ် ပဉ္စမမျိုးဆက် ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းမြင့်မားသော (supermaneuverable) တိုက်လေယာဉ်ဖြစ်ပြီးကို ရေဒါမြင်ကွင်းမှ ဖမ်းမိရန် ခက်ခဲသော ရေဒါလှိုင်း ပုံရိပ်လျော့ နည်းပညာ (stealth technology) ကို အသုံးပြုထားသည်။ အဓိကအားဖြင့် လေကြောင်း စိုးမိုးရေး တိုက်လေယာဉ်ဖြစ်သော်လည်း ၎င်း၏ မြင့်မားသော စွမ်းဆောင်ရည်များကြောင့် မြေပြင်တိုက်ခိုက်ရေး ၊ အီလက်ထရောနစ် စစ်ဆင်ရေး နှင့် ရှာဖွေထောက်လှမ်းရေး တာဝန်များကိုလည်း ထမ်းဆောင်နိုင်သည်။ လော့ခ်ဟိမာတင် အေရိုနော့တစ်သည် အဓိက ကန်ထရိုက်တာဖြစ်ပြီး လေယာဉ်ဖရိမ် အစိတ်အပိုင်း အမြောက်အမြား၊ လက်နက် စနစ်များ နှင့် အက်ဖ်-၂၂ ကို အပြီးသတ် တပ်ဆင်ခြင်းတို့ အတွက် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်သည်။ ထိုအစီအစဉ်တွင် ပါတနာ ဖြစ်သော ဘိုးအင်း ကာကွယ်ရေး၊ အာကာသနှင့် လုံခြုံရေးကမူ အတောင်ပံများ၊ ကိုယ်ထည်နောက်ပိုင်း၊ အေဗီရွန်းနစ် တပ်ဆင်မှု နှင့် ပိုင်းလော့နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး သင်တန်းပေးခြင်းများကို တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်သည်။
ထိုလေယာဉ်ပျံကို အမေရိကန် လေတပ်တွင် တရားဝင် အသုံးမပြုမီ ၂၀၀၅ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ မတိုင်မီက F-22 နှင့် F/A-22 စသည်ဖြင့် ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲခဲ့ကြပြီး စတင်အသုံးပြုချိန်မှ စ၍ F-22A ဟု ခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြသည်။ တည်ဆောက်ရေးကာလ အချိန် အလွန်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီး ကုန်ကျစရိတ် အများအပြား အသုံးပြုခဲ့ရသော်လည်း အမေရိကန် လေတပ် အနေနှင့် F-22 ကို အမေရိကန်တို့၏ အနာဂတ် အဓိက လေကြောင်းအင်အား အနေနှင့် မှတ်ယူခဲ့ကြသည်။ ထိုလေယာဉ်သည် သူတို့ သိရှိထားသမျှ သို့မဟုတ် တည်ဆောက်ဆဲ မည်သည့် တိုက်လေယာဉ်ပျံ ဟူသမျှ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ခြင်းမရှိဟု အမေရိကန် လေတပ်က ကြေညာထားသည်။ လော့ခ်ဟိမာတင်ကမူ ရက်ပ်တာ၏ ရေဒါမြင်ကွင်းမှ ဖမ်းမိရန် ခက်ခဲသော ရေဒါလှိုင်း ပုံရိပ်လျော့ နည်းပညာ၊ အရှိန်၊ လွယ်ကူထိရောက်စွာ ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်း၊ တိကျမှု နှင့် ပတ်ဝန်းကျင် အခြေအနေကိုလိုက်၍ ပြောင်းလဲနိုင်မှု တို့ကို လေကြောင်းတိုက်ခိုက်နိုင်စွမ်း နှင့် မြေပြင်တိုက်ခိုက်နိုင်စွမ်း တို့နှင့် ပေါင်းစပ်လိုက်သည့် အခါတွင် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အကောင်းဆုံး တိုက်လေယာဉ်ဖြစ်စေခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။ ဩစတြေးလျ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် အန်းဂတ် ဟူစတန်က ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် "F-22 သည် ယခုအထိ ဆောက်လုပ်ပြီးစီးသော တိုက်လေယာဉ်များတွင် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။" ဟု ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ F -22 ၏ ထူးခြားချက်မှာ အခြား မည်သည့် တိုက်လေယာဉ်တွင်မှ မရှိသေးသည့် ပုံမှန်ပျံသန်းနှုန်းတွင်ပင် အသံထက် မြန်အောင် ပျံသန်းနိုင်ခြင်း ဖြစ်ပြီး After Burner ဟု ခေါ်သည့် ထပ်ဆင့် လောင်ကျွမ်းခြင်း အသုံးမပြုပဲနှင့် အသံထက်မြန်အောင် ပျံသန်းနိုင်ခြင်း ဖြစ်သည်။
လေသူရဲ = (၁) ဦး
လေယာဉ်အလျား = ၁၈.၉ မီတာ
တောင်ပံ အကျယ် = ၁၃.၅၆ မီတာ
အမြင့် = ၅.၀၈ မီတာ
တောင်ပံ ဧရိယာ = ၇၈.၀၄ စတုရန်းမီတာ
အင်ဂျင် = Pratt & Whitney F119-PW-100 အင်ဂျင် (၂) လုံး
အမြင့်ဆုံး ပျံသန်းနှုန်း = အသံထက် (၂.၂၃) ဆ
ပုံမှန် ပျံသန်းနှုန်း = အသံထက် (၁.၈၂) ဆ
၂၀ မမ စက်အမြောက် (၁) လက်
ဝေဟင် - ဝေဟင်တိုက်ခိုက်ရေး အတွက်
AIM - 120 AMRAAM (၆) လုံး
AIM -9Sidewinder ( ၂ ) လုံး
ဝေဟင် - မြေပြင် တိုက်ခိုက်ရေးအတွက်
AIM - 120 AMRAAM ( ၂ ) လုံး
AIM -9Sidewinder ( ၂ ) လုံး နှင့်
ပေါင် (၄၀၀) ဗုံး (၂) လုံး (သို့မဟုတ်)
ပေါင် (၂၅၀) ဗုံး (၈) လုံး
↑ Drew, Christopher. "A Fighter Jet’s Fate PosesaQuandary for Obama." The New York Times, 10 December 2008. Retrieved:9May 2010.
↑ "FY 2011 Budget Estimates, p. 1–15 (61)." Archived4March 2012 at the Wayback Machine. United States Air Force, February 2010.
Aronstein, David C. and Michael J. Hirschberg. Advanced Tactical Fighter to F-22 Raptor: Origins of the 21st Century Air Dominance Fighter. Arlington, Virginia: AIAA (American Institute of Aeronautics & Astronomy), 1998. ISBN 978-1-56347-282-4.
Goodall၊ James C (1992)။ "The Lockheed YF-22 and Northrop YF-23 Advanced Tactical Fighters"။ America's Stealth Fighters and Bombers: B-2, F-117, YF-22 and YF-23။ St. Paul, Minnesota: Motorbooks International, 1992။ ISBN 0-87938-609-6။
Richardson၊ Doug။ Stealth Warplanes။ New York: Salamander Books Ltd, 2001။ ISBN 0-7603-1051-3။
Williams၊ Mel (ed.)။ "Lockheed Martin F-22A Raptor"။ Superfighters: The Next Generation of Combat Aircraft။ London: AIRtime Publishing Inc., 2002။ ISBN 1-880588-53-6။
Unique Flight Demonstration video – 2007 Capital Airshow in Sacramento – with narrative by F-22 pilot Paul "Max" Moga Archived 29 March 2009 at the Wayback Machine.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အက်ဖ်-၂၂_ရက်ပ်တာ&oldid=701951" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၅ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၆:၅၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။